Ziziphi iindlela zokudala i-traffic eyenza i-e-commerce backlinks?
Xa zonke iindlela zobuchule bokupakisha injini ziphunyezwa ngokufanelekileyo kwisiza sakho, kuya kunceda ibhankini yakho ibekwe phezulu kwiphepha lekhasi lokukhangela kwaye ihambise ukuhamba ngokukhawuleza kwezithuthi. Yenza ukukhangela injini yokukhangela ixabiseke kakhulu kwiiwebhsayithi ze-ecommerce. Ukuba kwenziwa kwinkimbinkimbi kunye nokuthengiswa kweendaba, ukuthengiswa kwe-imeyile kunye nezinye iiprogram zokuphromotha, kwenza ukuba nayiphi na ishishini le-intanethi liphumelele.
I-SEO kwifom eyona siseko ingahlulelwa kwi-off-and-page-optimisation. Ukulungiswa kwekhasi elikulo libhekisela kuwo onke amashishini ase-site asebenzayo ekuphuculeni amava omsebenzisi kunye nomthombo wakho wewebhu. Ngaphezu koko, inceda ukukhangela iinjinjini ukuqonda ukuba yeyiphi indawo yakho ekufuneka uyivumele ukuba ibonise yona ngombuzo ofanelekileyo womsebenzisi. Ukuphuculwa kwekhasi lokungaxhasi kunceda ukwenza iinjongo zokukhangela ukhethe ngqo iphepha lakho lewebhu njengento efanelekileyo kakhulu kumbuzo womsebenzisi. Inxalenye engundoqo yale nto ivela kwi-backlinks. Kufuneka ufumane i-backlink esemgangathweni esuka kwezinye iindawo zewebhu ezihlobene niche ukwenza indawo yakho ibonakale kubaphulaphuli abajoliswe kuyo.
I-backlink kwixesha lawo ihlukaniswe ibe yi-dof follow no-nof. Ukulandela i-backlinks yilezo ezifaka isandla kwiwebhusayithi yakho SEO. Unxibelelwano olunjalo lusebenza njengamavoti avela kwezinye iindawo.
Ngenye indlela, i-backlinks ayixhasi xa umntu enika i-backlink engadluliseli nayiphi na ixabiso kwisayithi edibeneyo. Ukwenza unxibelelwano olungasemva, umlobi ufuna nje ukufaka isicatshulwa esongezelelweyo kwi-HTML yekhonkco. Ukuhlolisisa ikhowudi ye-HTML, unokukwazi ukuba ikhonkco ilandelwa okanye ayikho ilandelayo. Ngokomzekelo, inani elikhulu leekhonkco ezivela kwi-YouTube, i-Facebook, iiblogi kunye neifom ziphantse zilandele. Kukho okuhle kummandla wakho wegunya, kodwa awukwazi ukukunika ukunyusa kwi-injini ye-injini.
Indlela yokujonga ixabiso leeluncedo ezingenayo?
Kukho imiba emininzi ebalulekileyo ekufuneka ithathelwe ingqalelo ekuqaliseni ixabiso kunye neempembelelo ze-backlinks.
Makhe sixoxe ngeempawu zokubaluleka kwe-backlink ebalulekileyo:
Izixhumanisi zangaphandle ezivela kwiindawo eziphakamileyo ziba luncedo ngakumbi ekusebenziseni i-website kunezo ezivela kwiindawo ezingabalulekanga nakwizinga eliphantsi;
Iinkcukacha ezivela kwimimandla ekhethekileyo zizisa ixabiso elongezelelweyo kwisayithi lakho kunezixhumanisi ezivela kumasayithi adibene nawe ngaphambili;
Ukubambisana neziqulatho zomxholo zamukelwa ngabasebenzisi abangcono kunokuba zingabalulekanga kwesihloko;
Ukudibanisa neetekisi ezichanekileyo ezilungisiweyo kunye nokuchithwa kwexabiso eligqityiweyo igama, ngokukodwa ukuba livakala ngathi igama lakho.
njani ukudala i-tralink generating backlinks?
Indlela elula yokufumana i-backlink ebonakalayo kwindawo yakho ye-e-yorhwebo yenzelwe ukudala umxholo omkhulu kunye nokunyanzela ebhaliweyo, kwividiyo okanye ifom evakalayo abasebenzisi abaza kubelana ngayo ngesifiso sabo.
Yenza ukuhlolwa kweemveliso zakho
Olunye uhlobo olulula kodwa luncedo lwakhiwo lokufikelela kwiiblogi ukwenza ukuhlaziywa okuhle kweemveliso zakho. Kuya kulungele ukugcina ikhonkco kwi-site yakho Source .